Rikoooo - ပျံသန်းမှု Simulator များအတွက်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖိုင်တွေ
Concorde သမိုင်းဆိုင်ရာ Pack ကို
Boeing 727-200 တွင် Liveries 154 ဖြင့်ပျောက်ဆုံးနေသည် FSX & P3D in P3Dv5
Airbus A-320 မိသားစု Mega Pack FSX & P3D
နှင့်အတူဘုံကိစ္စများ FSX နှင့် VRS TACPACK နှင့်အတူပြIssနာများ
Concorde Historical Pack သည်မလှုပ်မရှားနိုင်သည့်အပြင်လှုပ်ခြင်းနှင့်အခြားပျံသန်းမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်
စီမံကိန်း AIrbus Liveries?
ဘိုးအင်း 777-200 megapack အလိုအလျောက်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ bug ကို
767-300 အထုပ် A / C အလင်းရောင်
Vedette: Concorde သမိုင်းဆိုင်ရာအထုပ် FSX & P3D
Flash သတင်း: ငါတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ကိုရှာဖွေရန် add-ons နှင့် 100% သဟဇာတ Prepar3D v4? ဒီ link ကိုလိုက်နာပါ:
အဆိုပါစာကြည့်တိုက်ထဲသို့ Added အဆိုပါ 8 နောက်ဆုံးသတင်းများ Files တွေကို
Concorde သမိုင်းဆိုင်ရာ Pack ကို FSX & P3D v2020
Piaggio P-166 စုဆောင်းမှု FSX & P3D v2.0
Howard 250 Trigear အထုပ် FSX & P3D v1.0
Forum:5နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာများ
Concorde သမိုင်းဆိုင်ရာ Pack ကို (1 စာတိုက်)
နယူးအဖွဲ့ဝင် (3 စာတိုက်)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (2 စာတိုက်)
Concorde အမွေစီမံကိန်း (3 စာတိုက်)
Boeing 727-200 တွင် Liveries 154 ဖြင့်ပျောက်ဆုံးနေသည် FSX & P3D in P3Dv5 (2 စာတိုက်)
Simu: အဆိုပါနောက်ဆုံး5ဖိုင်တွေ
Simu:5နောက်ဆုံး update လုပ်ဖိုငျမြား
1. Concorde သမိုင်းဆိုင်ရာ Pack ကို FSX & P3D v2020
5. ဘိုးရင်း ၇၅၇-၂၀၀ Donald Trump FSX & P3D
Simu:5အများဆုံးဆွဲယူတဲ့ဖိုင်တွေ
အဆိုပါပြင်သစ်လေကြောင်းစင်းကို v2.1 FSX > 779 790
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကိုက F> 695 945
စော်ဘွားရေယာဉ်စု FSX & P3D > 467 471
အဲယားဘတ်စ် A380-800 VC ကိုပြင်သစ်လေကြောင်း> 315 270
Egyptair စင်းကိုအန္တိမ pack ကို v> 304 273
အဆိုပါ6အများစုဟာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Files တွေကို
Télécharger: 779 790
Télécharger: 695 944
Télécharger: 467 471
Télécharger: 315 270
Télécharger: 304 273
သင်္ဘော USS Nimitz & သင်္ဘော USS ချို V2 FSX & P3D
Télécharger: 201 728
Last Updated Files တွေကို
ရှုခင်းလုံးဝဓာတ်ပုံအစစ်အမှန်လ (USA) ၏ Crater ထံမှများအတွက် FSX နှင့် P3D v2 + ။ စုစုပေါင်း 3625 စတုရန်းကီလိုမီတာကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ 1 m / pix ၏ resolution သည်သင့်အားမြေပြင်အနီး၌ပင်သင်ပြောင်ချောင်နေသောပုံများရရှိစေသည်။ အကောင်းဆုံးအနိမ့်နှင့်နှေးကွေးစစ်ဆင်ရေးများတွင်ခံစား! 10 မီတာမြင့်မားသော resolution မြင့်ကွက်လည်းရှိသည်။ အဲဒီကိုရောက်ဖို့ Hailey မြို့လေဆိပ်ကနေပျံသန်းနိုင်ပါတယ်
အ Rikoooo အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကိုတစ်ဦးကစကားလုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကြီးထွားလာသည် Rikoooo ယခုရှိပါတယ် 196,192 မှတ်ပုံတင်ထားသောအသင်းဝင်များ၊ add-onငါတို့ပြသနေတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုအတွက်သင့်ကိုလုံလောက်စွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဆင်မှုနှင့်ဖိုင်ကိုမွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားပျံသန်းမှုခြင်း simulation download sites များနှင့်မတူစေခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးဖြစ်သည် add-ons နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ထူးခြားမှု။
၁၉၅၈– ပစိဖိတ်မြောက်ပိုင်းလေကြောင်းလိုင်းမှလေယာဉ် Simulator များ
၁၉၃၆ British Continental Airways Ltd. : L'Europe du Nord sous Flight Simulator
၁၉၅၅– ဟောင်ကောင်လေကြောင်းလိုင်း၏ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ Simulator ကို
၁၉၅၆ ဂျာစီလေကြောင်းလိုင်းလီမိတက် - Les Iles Anglo-Normandes sous Flight Simulator
1973-2009 Arctic Circle Air Inc. : Le Cercle Polaire အာတိတ် sight Flight Simulator